Ndị ọrụ nyocha na Mahadum Steeti Washington ewepụtala ụzọ iji tụgharịa ihe mkpofu plastik kwa ụbọchị ka ọ bụrụ mmanụ ụgbọ elu, mahadum ahụ kwupụtara na Tuesday. E bipụtala ọmụmụ a na ntanetị na akwụkwọ akụkọ Britain Applied Energy.
Ndị nyocha ahụ tupuru ihe polyethylene dịka karama mmiri ịnweta mmiri, karama ụmụaka na akpa rọba n'ime iberibe nha ọka osikapa ma tinye ha na carbon na -arụ ọrụ, ihe mkpali. 'Achịcha ya' n'ime igwe nrụpụta tubular na okpomọkụ sitere na 430 ° C ruo 571 ° C, a na -emezi iberibe ya ka ọ bụrụ mmanụ ụgbọ elu 85% na mmanụ dizel 15%.
Ndị nchọpụta na -ekwu na plastik nwere ọtụtụ mkpụrụ ndụ hydrogen, nke bụ akụkụ dị mkpa mmanụ. Manaplastic siri ike iweda ala, naanị mgbakwunye nke ihe na -akpali ihe nwere ike imebi njikọ kemịkal ya wee mee ya mmanụ. Ha enweela ike ịtụgharị 500kg plastik ka ọ bụrụ 350kg mmanụ ma mepụta gas na -ere ọkụ dị ka hydrogen, methane, ethane na propane. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ike niile dị na plastik nwere ike ịnakọta site na iji usoro a, ịdị mma ume dịkwa mma, usoro a dịkwa mma maka imepụta oke.